Madaxweynaha soomaaliya oo Ka Tacsiyadeeyay Dadkii Ku Dhintay Weerarkii Maanta Ee Muqdisho – The Voice of Northeastern Kenya
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka tacsiyadeeyay Alla ha u naxariistee dadkii ku geeriyooday falalkii waxshinimada ahaa ee maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Innaa Lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Alle ha u naxariisto dhammaan dadkii ku shahiiday weerarkii maanta dhacay oo uu kamid ahaa Xildhibaan Saqar Ibraahim Cabdalla oo ahaa Wasiir Ku Xigeenka Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada.
Waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed la wadaago in shacab iyo ciidanba loo midoobo Al-shabaab ee maalin walba doonaya in ay daadiyaan dhiiga shacabka Soomaaliyeed, burburiyaan hantidooda, barakiciyaana maatida si aysan u hana qaadin dowladnimadeeda.
Sugidda nabadgalyada waa masuuliyad saaran ciidamada iyo hay’adaha amniga, waana in ay dardargeliyaan hawlaha loo igmaday, shacabkuna waa in ay gacan ka geystaan sugidda nabadgelyada.
← Magacyada In Ka Badan 10 Taliye Boolis Oo Loo Magacaabay Gobolka Banaadir
Madaxweynaha dalka oo canaantay saddex ka mid ah golihiisa wasiirada →